महिलाका लागि नेतृत्व विकास - प्रश्नोत्तर - प्रकाशितः असार २६, २०७५ - नारी
नेतृत्व विकास के हो ?
अरूलाई उत्प्रेरित गर्दै चुनौती सामना गर्न सिकाउनु तथा समग्रलाई समेटिने आवाज बोल्न सक्षम हुनु नै नेतृत्व विकास हो ।
नेतृत्व विकासका लागि आवश्यक तत्व के हुनसक्छन् ?
वाकपटुता, नवीन सोच, अरूलाई कन्भिन्स गर्न सक्ने कला, धैर्य, विचार र सोच बुझेर सबैलाई समेट्न सक्ने गुण नै नेतृत्व विकासका सूत्र हुन् ।
नेपाली महिलाका लागि यो कत्तिको आवश्यक कुरा हो ?
३३ प्रतिशत आरक्षणले केही महिलालाई नेतृत्व तहमा पुर्‍याइसकेको तथ्य हामीले स्वीकार गर्नैपर्छ । नेपाली महिलाको अबको मुद्दा भनेको कसरी बढीभन्दा बढी महिलालाई नेतृत्व तहमा पुर्‍याउने भन्ने हो । हामी अहिले पनि महिलाहरू नेतृत्व तहमा आउनुपर्छ भनेर सोहीअनुरूप प्रयास गरिरहेका छौं । घर होस् वा समाज, कार्यालय होस् वा राष्ट्र सबै ठाउँमा महिलाहरू नेतृत्व तहमा पुग्नुपर्छ भन्ने अभियानलाई सफल पार्न पनि यो अत्यावश्यक कुरा हो ।
यसले महिलामा पार्ने प्रभाव ?
नेतृत्व भन्ने कुरा कसैले दिँदैमा प्राप्त भैहाल्ने कुरा होइन । यसलाई यसरी बुझ्नु जरुरी छ कि सर्वप्रथम महिला आफैं यसका लागि सक्षम हुनुपर्छ । आफूमा क्षमता अभिवृद्धि गरेर, आफूभित्रको खुबी पहिचान गरेर अनि त्यसलाई बाहिर प्रस्तुत गर्नसक्ने कला सिकेर आफूलाई उक्त तहमा उभ्याउन सक्नुपर्छ । जसले अन्य महिलालाई उत्प्रेरित गर्ने काम मात्र गर्दैन राष्ट्र हितका पक्षमा समेत दरिलो प्रभाव छाड्छ ।
- शीला शाक्य, अध्यक्ष, इनरह्विल क्लब न्यूरोड सिटी